HGH Thailand pharmacy inopa pachena kusununguka kwe Genotropin uye zvimwe zvibereko zveHGH kunyika dzose dzeThailand
Courier inotengeswa muBangkok - pharmacy yedu inotora mirayiridzo kubva ku9: 00 am - 8: 00 pm, mirairo yakagamuchirwa pamberi pe3: 00 pm ichaendeswa zvakafanana zuva.
Mirairo inogamuchirwa mushure me3: 00 pm manheru ichashandurwa i Zuva rakatevera, zvose kubva kuna 9: 00 ndiri ku 3: 00 pm.
Kuratidza kutakura uye kubhadhara mari mu Bangkok. Tiri kutumira kukura hormone via Air Cargo ku Chiang Mai, Phuket.
Taura mail kune Pattaya, Hua Hin, Udon Thani, Koh Samui, Koh Chang, Suratkhani uye mamwe maguta ose nemapurovhinzi eThailand.
Ndingakwanisa sei kuronga?
Mushure mekunge maita urongwa pane webhusaiti yedu kuburikidza nebhapu kana kuburikidza nenyanzvi pawebsite, akasimbisa kero uye nguva yenguva, mutinisi wedu anotanga kuisa mukugadzirira kuiswa kwehomoni yakakura.
"Ndapota siyai mashoko enyu ekukurukura kuti ataure newe, E-mail, foni
nhamba kana kuti Whatsapp, Line, Viber (kana pasina kutora nhamba yeThai) ".
Kupakata uye midziyo
Tichaisa Genotropin mune chigadzirwa chechiremba nechando, kusvika kuchengetedza yakanakisa yekushisa kwekuchengetedza kwekukura kwehomoni 2-8 degrees.
Chikamu chacho chinosanganisira (pasina mari):
BD Ultra Fine Pen Nhamba (40 zvimedu) zvepeni imwe neimwe
Mushure mekunge mavharaira urongwa, hama yedu inokutaurirai 1-2 maawa asati aberekwa (kuti musimbise mararamiro enyu)
Mutumwa anotumira urongwa kuimba yako, hotera, imba kana nzvimbo yemusangano (sepa ndege uye vamwe)
Mushure mokugamuchira murairo iwe unofanira kubhadhara courier mumari (tinobvuma chete Thai bah).
Kutumira Genotropin chibereko chinotora 1-2 mazuva kuPuti neChiang Mai.
Kusvika iye zvino, hatiiti kuendesa tsamba kuChiang Mai nePapket (shandura tsanangudzo dzomudzidzisi uye kuwedzerwa kuendeswa zvisarudzo).
Tora hormone yekukura muPuti kana Chiang Mai nebhadhiro yekubhadhara Air cargo
How to place order in Phuket and Chiang Mai?
Mushure mokuisa mutemo wenyu kuburikidza nebhadhiki yevadzidzisi pane website, foni kana email
"ndapota taura zita rako rekutanga uye rekupedzisira kugamuchira mirairo uye
Tichakutumira mabhandi edu ebhadharo kubhadhara, kusimbiswa kwe address address, ipapo tichakurukura newe foni kuti uwedzere tsanangudzo.
Mushure mekubvuma kubhadhara kubhengi rebhangi redu. Nhume yedu kubva ku9: 00 am kusvika ku8: 00 pm inotumira hurongedzo yako kuhofisi yendege muBangkok mune zvechiremba chigadziko nechando, kuburikidza nekusunungurwa kwemhepo yeThai Airways mutoro muThailand. Tinozadza zvinyorwa zvinodiwa, zita nezita remugamuchira, pamwe chete neguta uye nhandare iyo iyo mutengi anogona kugamuchira kuraira kwake. Mirairo yose inotumirwa neyokutanga ndege.
Nzira yekuwana sei chirongwa?
Chengetedza urongwa huri nyore nyore, iwe unongoda kuenda ku-airport, Air Cargo terminal, ine pasipoti kana id card kuti utore urongwa hwako. Iwe unofanirwa kuendesa kune mushandi wewindo rekuendesa Air cargo risiti yekutora kwako.
Genotropin kutumira kuHua Hin, Pattaya uye mamwe maguta nematunhu
yeThailand (1-3 mazuva)
Kuendeswa kuHua Hin, Pattaya uye mamwe maguta uye nzvimbo dzeThailand inogadzirwa nekubhadhara kare uchishandisa EMS Express Thailand post service. Mushure mekugamuchira murairo kuburikidza nemuongorori pane webhusaiti kana urongwa hwebhasiki (Mazita ezita nemashoko ekutumira) Tichatumira zvinyorwa zvekubhadhara kadhi rebhangi reThai. Pashure kubhadhara kubhadhara, mutinisi wedu anotora kuwedzera kwekutakura hormone mune zvekurapa pakatengesa yekutumira kune mutengi. Kutumira kunobva ku9: 00 ini ku8: 00 pm kuburikidza neMEMS Express Thailand post basa (zvinotora 1-3 mazuva zvichienderana neshizha rinotumira)
Mushure mokutumira, tichakutumira nhamba yekutsvaga yechirongwa chako, iwe achagamuchira paunotaridzira suo neimba yako.
Nzira yekuita sei kuendesa kubhengi yebhangi muThailand?
Bhenji kutengesa ndiyo nzira yakavimbika uye yakachengeteka yokubhadhara zvinhu uye mabasa muThailand, pakugadzirisa iwe iwe unoda chete uzive nhamba yenyaya uye mubhengi webato rekukurukurirana.
Kuendesa kunogona kuitwa pane chero ATM inoshandisa mari yekuwanazve muATM uye kunyatsotsanangura nhamba yekambani yekugamuchira.
Kuendesa kunogona kuitwa mumunhu kuburikidza nebhangi, kuitira nyore,
taurira muongorori mubhangi kuti iwe unoda kutumira uye ichaita
kwete kutora kupfuura 15 maminitsi.
Hey. Ndakatumira chinyorwa. Wakazviwana here?
Hungu, chokwadi pahofisi yedu muBangkok
Inowanikwa paIndaneti nekadhi rechikwereti haisipo
Ndingabhadhara nekadhi rechikwereti 💳?